Taariikhda My Butros » 5 Jaban Fikradaha Winter Taariikhda
5 Jaban Fikradaha Winter Taariikhda
Last updated: Oct. 21 2020 | 2 min akhri
TIS xilli ciyaareedkan ee Kalsoonaada fasax, madadaalo qaboobaha iyo waqti la kuwa jecel yahay. Haddii aad tahay arday ii sida, kuwaas oo la dhibtoonaya inuu xitaa awoodin iibsashada waraaqaha musqusha, ka dibna aad raadinaya taariikhaha qaboobaha in ay yihiin labada xiiso leh iyo boorsada jeebka ma jebin doono. Waxaad tahay in nasiib. Kuwani shan taariikhda fikrado waa qaali ahayn oo is kululeeyo xiriirkaada fasax this.
1. Guriga Gingerbread ka wada dhig
Raaxeysan in aad ilig macaan, oo ha dhimbilo ay duuli leh dhismaha guriga Gingerbread ah. Welwelsan tahay la'aan talanti injineernimada? Mar dambe ma dhibin,, waxaa jira kuwaas oo xirmooyinka Gingerbread weyn oo ka mid ah dhammaan qalabka aad u baahan tahay, oo ah warqadda fariimaha si sahlan loo akhriyi (badan oo ka mid xitaa ka mid ah sawirada). Ahmiyad ka yar $20, xirmooyinka ayaa laga heli karaa suuqyada waawayn, dukaamada farsamada, iyo xitaa online. Gasho Gurtida fasax qaar ka mid ah oo aad hesho dhismaha! Qaybta labaad heer sare ah ururinayo abuuristan la cuni karo la jabiyo oo wada baabbi'iya oo. Dhab ahaantii yaboohay yabooh run ah oo cunto faro badan, iyo waqti aad u weyn.
2. Hot shukulaatada, lab iyo movie fasax ah
Wax garaaca qabow ee sida cabitaan kulul iyo dareenkuba ololaya oo jacaylka. Hagaag, laga yaabee in aad u daran. Waa maxay waxaan ula jeedaa waa in hab-siinta la leedahay qof gaar ah oo ku raaxaysanaya koob shukulaatada kulul Kulaashaan karaa insides aad ka cimilada qaboobaha qabow. Ku dar in fasax film heer sarre ah sida Eleven, Waa Life cajiib ah, Home Kali, Sidee Grinch ka xadeen Christmas ama A Christmas Story waana habeenkii taariikhda kama dambaysta ah. Ahmiyad aad u yar, waxaad badbaadin kartaa lacag, halka noqday hodonka ah in waqti tayo faa'daysan la mid aad jeceshahay.
3. Tag socod habeenkii si aad u aragto oo dhan nalalka quruxsan
Qurxinta Ciidaha waa qayb ka mid ah waxa ay ka dhigeysaa jiilaalka si qurux badan. Waxba ma ahan meesha aad ku nooshahay, waxaa ay u badan tahay in ay guriga dib markii guriga, wadada ka dib markii ay wadada uu damacsan yahay Misbaaxyo, Jawhartoodii, Hadyada iyo wax kasta faraxsan. Sug ilaa tan iyo fiidka, ka dibna u tagaan magaalada hoose ku socda ama xaafadaada oo wuxuu ku raaxaysan eegaya nalalka fasaxa jecel yahay, oo qurxinta (Fiiri inta badan kuwa qabanqaabada Galmudug badan oo aad ka heli karto). Xitaa waxaad iyada ka samaysaa karaa ciyaar by codeynta oo gurigu ku leeyahay Mudanayaasha fasax fiican. Waxba ahmiyad, taariikhda fudud si fudud lagu ifin kara ilaa aad xiriir.
4. Adventures Snow
Ka faa'iidayso bustaha barafka iyo gunti la soco mid u adventures qaar jecel yahay baxay ee weyn ee dibadda ku. Tag skiing dalka cross, tamashlaha ama dawo barafka ee park ee xaafaddaada ama xusus. Ku raaxayso duulaya hoos hills iyo soo ceshato aad carruurnimada la maalin ee ke. Dhis snowman ka wada ama qalcado ama tag barafka ee ah iskeytka-barafka dibadda. Ahmiyad aad u yar, dabiiciga ah waxay noqon karaan mid ka mid ah garoomada ciyaarta ugu fiican ee xiriirka liibaaniyey.
5. Farsamada DIY
Internet ayaa heysta fikrado xor ah xad-dhaaf ah DIY farsamada fasax iyo tilmaamaha. Dooro ah kuwa xiiso leh laba iyo madaxda dukaanka farsamo ama isticmaalaan qalabka aad ku yaal guriga iyo aad u hesho khaa'inka! Haddii aad marna ahaa taageere ee fanka iyo farsamada soo laabtay dugsiga dadweynaha, xusuusnow in ay wanaagsan mar walba in la isku dayo wax cusub, iyo baxo aaga raaxada. Ka sokow waxa aad helaysaa lamaanahaada dembi in aad ka soo caawin.
Kuwani shan taariikhda fikrado waa qaali ahayn, xariif ah iyo dammaanad doonaa waqti fiican adiga iyo qof aad jeceshahay uu u xilliga jiilaalka this. Ku raaxayso fasaxa oo wuxuu ku raaxaysan aad xiriir.
7 Taariikhda Qof walba From City New York Goes On
7 Siyaabo Sahlan ee ka dhigtaan dhaca in Love
Carar la Dogs: Qooyskaaga Pup Waxaad u hagto qofka wehelkaaga
Ma xalaal baa in JECLAAN Man A guursadey?